Diyaarad Ruushka leeyahay oo siday 71 qof oo rakaab ah oo burburtay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldDiyaarad Ruushka leeyahay oo siday 71 qof oo rakaab ah oo burburtay
February 11, 2018 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Diyaaradda burburtay ayaa nooceedu ahaa An-148 sida tan ka muuqata sawirka.
Moscow-(Puntland Mirror) Diyaarad Ruushka leeyahay oo siday 71 qof oo rakaab ah iyo shaqaalaha diyaaradda ayaa burburtay maanta oo Axad ah kadib markii ay kasoo muuqan weyday shaashadaha raadaarka, sida ay sheegeen warbixinadu.
Diyaaradda ayaa ka tagtay caasimada Ruushka ee Moscow waxayna ku socotay magaalada Orsk.
Ilo-wareedyo katirsan Adeegyada Gargaarka deg dega ah ayaa wakaalada wararka Interfax u sheegay in diyaaradu ay burburtay aysana jirin fursad ah in dadka saaran ay badbaadaan.
Waxaa la sheegay in ay ku dhacday meel u dhow Argunov, oo qiyaastii 80 kiilomitir dhanka koonfurta-bari ka xigta Moscow.
Sida ay warbaahinta Ruushka sheegtay, diyaarada ayaa laga waayay shaashadaha raadaarka labo daqiiqi kadib markii ay ka tagtay garoonka.
December 15, 2016 Ciidamada ammaanka Ruushka oo Moscow ku fashiliyay weeraro argagixiso oo ay ISIS qorsheysay
Muxuu yahay heshiiska ay gaareen dowladda federaalka iyo maamuul goboleedyada ee ku saabsan qeybsiga dakhliga kasoo xarooda kalluumeysiga?
Madaxweynaha Nayjeeriya oo sheegay in ciidamadu la wareegeen saldhigii ugu dambeeyay ee Booko Xaaraam
Abuja-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dalka Nayjeeriya Muxamadu Buhari ayaa sheegay in ciidamada Nayjeeriya ay qabsadeen mid kamid ah saldhigyadii ugu dambeeyay ee kooxda Booko Xaaraam ku lahayd gobolka waqooyi-bari ee Borno. Haddii warkaan, run noqdo, taasi [...]